Fanidiana tanteraka, tsy maintsy atao vaksiny manerana ny firenena any Aotrisy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Austria » Fanidiana tanteraka, tsy maintsy atao vaksiny manerana ny firenena any Aotrisy
Vaovao Mafana Austria • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fanidiana tanteraka, tsy maintsy atao vaksiny manerana ny firenena any Aotrisy.
Ny governemanta Aotrisy dia efa nametraka fanakatonana ampahany amin'ireo tsy vita vaksiny amin'ny ezaka hampihenana ny tahan'ny hopitaly ao anatin'ny firongatry ny tranga COVID-19.
Ny Chancellor of Austria, Alexander Schallenberg, dia nanambara androany fa hanomboka ny alatsinainy 22 Novambra ny fanakatonana tanteraka ny firenena ary haharitra 10 andro voalohany.
Schallenberg Nanampy izy fa ny fameperana COVID-19 dia azo itarina raha tsy manomboka mihena ny tahan'ny otrikaretina, saingy nanantitrantitra fa tsy hihoatra ny 21 andro ny fanakatonana.
Ny fanambaran'i Schallenberg dia tonga taorian'ny fivorian'ny governemantam-panjakana sivy, ny roa amin'izy ireo dia efa nivoady ny hametraka fanakatonana feno any amin'ny faritra misy azy ny alatsinainy, any amin'ny faritany andrefan'i Tyrol.
Ny fepetra vaovao dia mahakasika ny mponina manontolo ao amin'ny firenena. Ny governemantan'ny Aotrisy dia efa nametraka fanakatonana ampahany amin'ireo tsy vita vaksiny amin'ny ezaka hampihenana ny tahan'ny hopitaly ao anatin'ny firongatry ny tranga COVID-19.
Rehefa tapitra ny fanakatonana feno dia hijanona ny fameperana ho an'ireo tsy vita vaksiny.
Ny governemanta Aotrisy koa dia nanome baiko ny mponina rehetra ao amin'ny firenena mba hanao vaksiny manomboka ny 1 febroary amin'ny fikasana hiadiana amin'ny onjan'ny otrikaretina COVID-19.
“Tsy mbola naharesy lahatra olona ampy hanaovana vaksiny izahay. Efa ela loatra aho sy ny hafa no nihevitra fa afaka mandresy lahatra ny olona hanao vaksiny ianao, ”hoy ny Chancellor, nanome ny heviny momba ny didy momba ny vaksiny manerana ny firenena.
Schallenberg Nitaraina ny hery politika, ny fanoherana mahery vaika, ary ny vaovao sandoka miady amin'ny vaksiny.
Aotrisy manana ny iray amin'ireo taha ambany indrindra amin'ny vaksiny any amin'ny faritra andrefan'i Eoropa, ka 65% monja no voatsindrona amin'ny viriosy mahafaty araka ny angon-drakitra avy amin'ny oniversite Johns Hopkins.
Saika isan'ny ambony indrindra eto amin'ny kaontinanta ny tahan'ny otrikaretina. Ny tahan'ny tranga fito andro dia 971.5 isaky ny olona 100,000.